होली कसरी मनाउनुपर्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः फाल्गुन १५, २०७१ - साप्ताहिक
होली कसरी मनाउनुपर्छ ?
हुन त होलीमा कुहिएको अन्डा अनि लोलाभित्र ढुंगा राखेर हान्ने गलत प्रवृत्ति छ । सभ्य र सरल तरिकाले होली खेल्नु राम्रो हुन्छ । मलाई काठमाडौंको होलीभन्दा तराईको होली बढी रमाइलो लाग्छ ।
- हिमाल सागर, गायक
टीका लगाउन तथा होली खेल्न मन हुनेले रंग खेल्ने अनि चट्ट बसेर हल्का वाइन वा के पिउन मन लाग्छ अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी पिउने, साथमा मीठा-मीठा पकवान त छँदैछन् ।
- कविता शर्मा, अभिनेत्री
साना-ठूला सबैप्रति समान व्यवहार गर्दै रमाइलो गरी होली मनाउनुपर्छ । लोला हानेर कसैलाई दिक्क बनाउनु हुँदैन । हिलोले होली नखेलौं, महँगा लुगाफाटा नच्याती रमाइलो गरी होली खेलौं ।
- जतिन ताम्राकार, अभिनेता
नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक देशमा होलीलाई सद्भाव, सहकार्य एवं सहअस्तित्वलाई प्रगाढ पार्ने, एकताको सन्देश दिने गरी मनाउनुपर्छ ।
- ऋतु कँडेल, गायिका
पानीको हाहाकार भएको तर विश्वभरमै जलस्रोतको दोस्रो धनी भनिएको देश हो हाम्रो । अब खोई के होली खेल्नु ?
- स्वरूपराज आचार्य, गायक
वास्तवमा रंगले धेरैको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । बितेका वर्षहरूको जस्तो यो वर्षको होली जर्बजस्तीको पर्व तथा गाजा र रक्सीको पर्व नबनोस् । होलीको रंगले वैमनस्यता होइन, सद्भाव कायम गरोस् ।
- रमेशराज भट्टराई, गायक
खोई कसरी मनाउने भन्नु, रंग लगाएर मनाऊँ भनें काठमाडौंमा पानीको समस्या सबैले भोगेकै कुरा हो । कसरी पखाल्नु रंग ? घरमा जम्मा गरेको पानी छ्यापेर मनाउन त भन्दा फेरि चिया केले पकाउने ? त्यसैले होलीचाहिँ हामीले बाँचुन्जेल मेलम्ची नै पुगेर खेल्नुपर्ला जस्तो छ ।
- सिरु विष्ट, अभिनेत्री
होली हाम्रो संस्कृति हो र यसलाई सांस्कृतिक हिसाबले नै मनाउनुपर्छ ।
- डिजे शिशिर
संस्कार जोगाउने हिसाबले होली खेल्नु राम्रो हो, तर मानिसहरू बढी मदिरापान गरेर लापरवाहीपूर्वक सवारी साधन चलाउँछन् र दुर्घटनाको सिकार हुन्छन् । नचिनेको मान्छेलाई जबरजस्ती होलीको रंग लगाउने र लोला हान्ने प्रवृत्ति मलाई ठीक लाग्दैन ।
- अदीति बुढाथोकी, मोडल
मोबाइल अफ गर्ने, फोन सम्पर्कबाट टाढा रहने । घरमा बस्ने, दुई बोतल बियर पिउने अनि साउथ इन्डियन फिल्म हेर्ने । यति गरेपछि न विकृति, न फोहर पानीको सिकार भइने डर, न त धेरै पैसाको नाश, न अन्य कुनै सामाजिक समस्या— जय होली !
- सुवास रेग्मी, संगीतकर्मी
आरामले झ्याल-ढोका बन्द गरी सुतेर, टेलिभिजनमा होलीको लाइभ प्रसारण हेरेर, तर बिजुली भएको अवस्थामा मात्र ।
- कृति भट्टराई, सञ्चारकर्मी/अभिनेत्री
होली र रमाइलो एक-अर्काका परिपूरक हुन्, रमाइलो गरिएन भनें होलीको मज्जा नै हुँदैन । भरपुर स्वतन्त्रताको पर्याय पनि हो, होली । यद्यपि रमाइलोका नाममा हप्तौं अगाडिदेखि लोला हान्ने चलन भने विकृति नै हो ।
- कला पंगेनी, गायिका
रंगहरूको यो पर्व सकेसम्म धेरै रंग प्रयोग गरी मनाउनुपर्छ । पानीको प्रयोग सक्दो कम गर्नुपर्छ । एक त हाम्रो देशमा पानीको कमी छ, त्यसमा पनि अरूलाई हानी हुने गरी मोबिल लगाएर, पानीको बेलुन हानेर होली खेल्नु हुँदैन ।
- आमिर शेख, गायक
होली अनि म एउटा फेसन डिजाइनर, योभन्दा रमाइलो चाड मेरा लागि अरू कुन होला र ? वर्षभरि मेरा हातहरूले कलर पेन्सिलको सहायतामा पेपरमा रंगीन चित्रहरू कोर्छन्, तर होलीमा शरीरका हरेक अंगमा रंग र पानीको अनुभव गर्न पाइन्छ । म आफ्ना साथीभाइ, आफन्तलाई रंगको महत्त्व बुझाउँदै अनि आत्मीयता बाँड्दै होली मनाउँछु ।
- विश्व गौतम, फेसन डिजाइनर
होली प्रेमपूर्वक सद्भाव एवं भाइचारा बाँड्दै खेलिने पर्व हो । हिजोआज खेलिने होलीमा अबिर, रंग आदि दल्दा जर्बजस्ती आँखा नै फुट्ला जस्तो गरी हालिदिन्छन् । पानी खेल्दा पनि ज्यान नै धरापमा पर्ने गरी छ्याप्छन् । अहिलेको होली होली होइन, अदृश्य गोली हो ।
- रवि डंगोल, हास्यकलाकार
होली नारीको चोली भिजाउने पर्व हो । यसले युवाहरूमा उमंग थप्छ । यतिबेला नराम्रा घटना पनि घट्छन् । सामूहिक रूपमा आफ्ना प्रिय साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै होली मनाउनुपर्छ ।
- रेखा पुरी, मोडल
होली सुखद पर्व हो । त्यसैले यसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्छ । यो आफूलाई मन परेका युवतीहरूलाई भिजाउन पाइने एक मात्र अवसर हो ।
- टेकेन्द्र शाह, भिज्युअल एडिटर
होली रिस उठेको मान्छेको मुखभरि कालो रंग दलिदिने राम्रो अवसर हो । मन परेको मान्छेसँग दिलको रंग साटेर होली खेल्नुपर्छ ।
- स्मृति पोखरेल, गायिका
होली पर्व आफैंमा खुसीयालीको पर्व हो । त्यसैले आफू मात्र होइन, अरू पनि खुसी हुने गरी होली खेलौं । आफ्नो खुसीका लागि अनेक थरी रंग, लोला र मोबिल प्रयोग गर्दै अरूसँग जर्बजस्ती नगरौं ।
- निर्मल शर्मा गैंडा, कलाकार/निर्देशक
म त होली रंगसँगभन्दा पनि पानीसँग खेल्न मन पराउँछु । गर्मीमा शीतल हुने अनि छालाको एलर्जी पनि नहुने ।
- रिमा विश्वकर्मा, नायिका
परम्परालाई निरन्तरता दिँदै भावी पुस्तालाई पनि यसको महत्त्व बुझाउन सके यसमा सिर्जित भएका विकृति-विसंगतिहरू आफैं हटेर जाने थिए कि ?
- पर्शुराम रिजाल, गायक
होली आफैंमा रंगिलो र गर्विलो पर्व हो, तर यसलाई मनाउने तरिका चाहिँ भडि्कलो बन्दै गएको छ । होली आउन धेरै पहिलेदेखि नै फोहोर पानीको पोका हानेर हामी महिलालाई त वाक्कै पार्छन् । होलिकै दिन पनि असभ्य तरिकाले होली खेल्दा कतिको ज्यान गएको छ, तसर्थ होलि पर्वलाई सभ्य पर्व बनाउनु जरुरी छ ।
- देविका केसी, गायिका
मनमा कालो रंग पोतेर, हातमा विभिन्न रंग बोकेर होली खेल्नेलाई, भागंको खोली ख्वाएर ।
- सुरज सुब्बा,निर्देशक